induction Hardening steel Cam Assembly-HLQ nidaamka qallajinta induction
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhibaatada Induction / Iskudhicii Qallooca Birta
Category: Dhibaatada Induction Tags: iibso mishiinka qallajinta indha-indheynta, adkeyn, tartamada dhalista adkaanta, adkaanta indha-indheeyaha, biinanka adkeeya induction, cam adag adag, KU adkayd, Mashiinka qallajinta, IN ku adkaanta dusha sare, adkaynta induction, laqabsashada xayiraadaha, Qalabyada cufan ee adag ee indha-indheynta, Qiimaha mashiinka adkeeya, induction adkaanta steel Cam
Ujeeddo: Adkeynta adkaynta wareegga assemb ”isku imaatinnada kaamerada birta adag
Waxyaabaha: ¼ ”shirarka carada qaro weyn ee joomatariyo kaladuwan
Heerkulka: 1650 ºF (900 ° C)
Joogtaynta: 177 kHz
DW-UHF-10kW nidaamka kuleylka induction, oo ku qalabeysan xarun kuleyl fog oo ka kooban hal halbeega '1.0ilF capacitor' iyo aaladda kululaynta kuleylka ee loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah codsigan
Wareeg laba-jibbaar ah ayaa loo isticmaalaa in lagu diiriyo kamaradaha. Waqtiga kuleylku wuu kala duwan yahay 120-150 sekan. Kulaylka kadib, qaybaha waxaa lagu demiyaa biyaha.
Dhibaatada Induction dusha sare ee kamaradda oo leh natiijooyinka soo-kicinta:
• kululaynta labiska ah ee natiijooyinka lebiska
• hal gariiro ayaa loo isticmaali karaa joomatariyo badan
• natiijooyin isdaba joog ah gabal gabal
Waxaa jira kumanaan si aad ah loogu guuleysto Mashiinnada adkaanta indha-indheynta oo soo saaraya malaayiin qaybood oo la siiyay qaybaha kala duwan ee warshadaha. Waxyaabaha sida joogtada ah u mara adkaynta indha-indheynta (IH) waxaa ka mid ah qaybaha sida camshafts, crankshafts, gears, sprockets, fallaadhihii gudbinta, biinanka kubbadaha, biinanka, rakika ilkaha, dunmiiqa wareega, jinsiyadaha dhalista, dhejiyeyaasha, aaladaha shaqada, kabaha raadraaca dhulka - mishiinnada dhaqaajiya - liistadu aasaas ahaan dhammaad ma leh. Tusaale ahaan, Jaantusku wuxuu muujinayaa qaabab yar oo joomatari ah oo si joogto ah indha-indheynta loo adkeeyay.
Qalinjebinta Qalinjebinta Qodasho